DEG DEG:-Dab xoogan oo ka socda dhul-beereed ku yaalla… - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
DEG DEG:-Dab xoogan oo ka socda dhul-beereed ku yaalla…
August 1, 2020 at 12:16 DEG DEG:-Dab xoogan oo ka socda dhul-beereed ku yaalla…2020-08-01T12:16:32+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Wararka aan ka heleyno deegaan ka tirsan Gobolka Mudug ayaa waxaa ay sheegayaan in dhul-beereed ku yaalla halkaas uu qabsaday dab xoogan oo geystay Khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed.
Dabkaas ayaa waxaa uu sigaar ah u qabsaday dhul-beereed ku yaalla deegaanka Ceel-ducaale oo hoostaga Magaalada Xeebeedka Hobyo ee Gobolka Mudug, waxaana dabkaas uu yahay mid weli socda oo aan la demin, mana jiro gurmad halkaas gaaray.
Dadka deegaanka ayaa soo weriyay in dabka uu ku geeriyooday hal ruux oo goobta ka Agdhawaa, waxaana sidoo kale jiro Khasaaro uu dabka u geystay dhul-beereed, iyadoo qiiq iyo uuro hawada sare laga arkayo.
20-ka bishii lasoo dhaafay ee Luuliyo ayay aheyd markii sidaan oo kale uu dab xoogan u qabsaday dhul beereed ballaaran oo ku yaalla deegaanka Wisil ee Gobolka Mudug, waxaana dabkaas uu baaba’shay Ku dhawaad 20 beerood.
« Kabtanka xulka Cameroon ee 1990 Stephen Tataw ayaa dhintay isagoo 57 jir ah.
Raphaël Varane oo ka hadlay kulanka la wada sugayo ay Man City ku booqanayaan garoonka Etihad »